eHarmony na-ebupụta Egwuregwu Egwuregwu maka Ọrụ… Srsly | Martech Zone
Ebe nchọta Job dị otu iri na abuo. Enwere ọtụtụ n'ime ha ole na ole n'ime ha ọbụna na-anwa ịkọwa ọdịiche dị iche site na ịsị na ha bụ, "eHarmony" maka ọrụ. Dabere na Dr. Neil Clark Warren, onye malitere eHarmony, “Ha abụghị.” Ugbu a ụlọ ọrụ ya nwere ngwaahịa legit iji gosi ya na ọ bụ ụzọ mara ihe na ọkaibe karịa ka ị nwere ike iche.
Warren na ndị otu ngwaahịa ya malitere oru dị elu site na eHarmony na Los Angeles n’izu gara aga. (Ngosipụta, ha bụ ndị ahịa PR nke Elasticity, ụlọ ọrụ m na-arụ ọrụ maka, site na Branded Strategies.) Ikpo okwu na-ewe alụmdi na nwunye kwekọrọ algọridim si na mbụ ha n'elu ikpo okwu na-etinye ya n'ọrụ na kenha nsogbu. Mana ha kpachapụrụ anya ịkọwa na ọ bụghị mkpakọrịta nwoke na nwanyị / alụmdi na nwunye algọridim jikọtara n'ime saịtị ọchụchọ ọrụ.
"Anyị ji otu nkà ihe ọmụma ahụ si na ahụmịhe anyị na-ewu eHarmony engine ma jụọ ajụjụ ndị yiri ya banyere ịmakọ ọrụ," kọwara Steve Carter, Onye isi oche nke Matching na eHarmony, ma ọ bụ nnukwu ọrụ maka nkà na ụzụ dị n'azụ Ọrụ Ndị Elu. Ya na ndị otu ya wuru algorithm dị iche nke na-ewe data sitere na onye na-achọ ọrụ na data sitere na ndị nwere ike iwe mmadụ n'ọrụ wee dakọtara ha tinyere isi ihe 16, dị ka ihe mmekọrịta 29 metụtara nyocha ha na-eji ngwaahịa eHarmony. Ihe iri na isii bụ ndị nwe ụlọ, mana ha daba na bọket atọ dị mkpa: mmadụ, ọdịbendị na mmekọrịta.
Yabụ iji mee ka ọ daa, ha mepụtara ọrụ dabara na ọrụ, ọ bụghị ọrụ nyocha ọrụ, na ụlọ ọrụ nwere ike ịkwụ ụgwọ ịdenye aha ebe ọ bụ na, na tiori, ọ nwere ike inyere otu ụlọ ọrụ aka ndị ọrụ ka mma, nwekwuo ohere nwee ihe ịga nke ọma ma soro ụlọ ọrụ nọrọ ogologo oge. Nke a nwere ike ọ bụghị naanị ịbawanye arụpụta mana belata ọnụahịa dị ịtụnanya nke ị were ndị mmadụ ọhụrụ. Ntughari, dika ha si ekwu na uwa ndi mmadu, bu ihe ojo.
Ndị na-achọ ọrụ nwere ike iji saịtị ahụ n'efu ma ọ nwere mpempe akwụkwọ ụdị atụ anya mmadụ maka usoro ịbanye. Site n'ebe ahụ, saịtị ahụ na-atụ aro ndị were gị n'ọrụ nke ga-adị mma maka ụdị mmadụ gị, mkpa ọdịbendị, ahụmịhe na ndị dị otú ahụ. Ọ bụrụ n’itinyela ọrụ naanị ka ị chọpụta na ị naghị adaba na ọdịbendị ma ọ bụ na ọ masịghị gị, ị ga-ahụ uru mmadụ na-enweta na ụdị ihe a.
Dị ka ị ga-atụ anya n'aka ọkachamara mmekọrịta, Warren tụpụrụ ụdị mmekọrịta na ọnụ ọgụgụ niile na-atọ ụtọ gbasara otu ọ bụrụ na obi adịghị gị ụtọ na ọrụ gị, nke ahụ metụtara ndụ gị, mmekọrịta gị na ahụike gị na ndị ọzọ. Yabụ, na isi, Ndị Ọrụ Elu ga-arụ ụka na ọ nwere ike inyere ụlọ ọrụ aka inwe ndị ọrụ nwere obi ụtọ na-ebi ndụ obi ụtọ na yada yada.
Ajuju m, nke m ga-abara gị ma hụkwa nzaghachi gị na nkọwa, ndị a bụ:
Enwere ike itinye uche na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na algorithm? N'ịbụ a tech-savvy na-ege ntị, m maa bụ na ị ga-asị “ee” ma ihe banyere ụmụ mmadụ njehie akpata na ntinye? Mgbe m na-achọ ọrụ, enwere m ike ikwu ihe m chere na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ karịa ihe m chere, chee ma ọ bụ kwere banyere m dị ka nwa akwukwo. Ọ bụ ezie na Ewelighị Ọrụ dị elu ka ọ bụrụ ntọala ma ọ bụ saịtị ọchụchọ, echiche nke edejupụtara na mpempe akwụkwọ ga-abụ otu n'ime, “Gịnị ka m chere na ndị ga-ewe gị n'ọrụ chọrọ ka m kwuo?”
Ndị ụlọ ọrụ na-azụ teknụzụ maka ihe ọ bụla site na ire ahịa iji nyefee agbụ na karịa. Mana ha dị njikere ịtụkwasị obi na algorithm ịhọrọ, ma ọ bụ de-họrọ, ndị na-achọ ọrụ? O doro anya na ọ ka mma karịa ịlele ibe Facebook ha maka foto bong bong, yana ọrụ dị elu ga-abụ mkpebi ikpeazụ maka onye ọ bụla, mana otu ị ga-esi tinye ego na teknụzụ bụ ọrụ ndị ọrụ HR.
Kedu ihe na-eme ndị na-ewe ndị ọrụ akwụ ụgwọ ka ha debe ndị na-aga ime n ’obodo ha oge mmadụ na ọdịbendị / mmekọrịta ha nwere ike ịrụ ọrụ megide ndị na-achọ ọrụ?
Ruo ókè dị a anaa ka ụzọ dị otú a ga-esi ruo? Anyị enwere ike ịmepụta algorithm iji kwekọọ ụlọ ọrụ na ndị ahịa? (Ọ ga-amasị m ịhụ data ahụ. Heh.) N'ezie otu ụzọ ahụ nwere ike itinye aka na mmekọrịta ndị mmekọ na ndị mmekọ. Mana ọ chọrọ ọkwa ụfọdụ nke nyocha nke atọ nke otu ndị ahụ metụtara. Ole ụlọ ọrụ ole na ole ga-emepe ụzọ ha iji nwalee nzukọ mmadụ?
Achọpụtara m Ọrụ dị elu na-adọrọ mmasị. Ọ ga-adọrọ mmasị ịhụ ya na-arụ ọrụ. Ajụjụ dị mkpa bụ: Gịnị ka i chere? You ga-eji ya dị ka ego njikwa ma ọ bụrụ na ị nwere ohere? Ga-eji ya dị ka onye na-achọ ọrụ? Ihe ndị a kwuru bụ nke gị.
Tags: algọridimeHarmonyọrụ dị eluNgwaọrụ HRndị ọrụ nchịkwa mmadụọrụ dabarakenha technology
Apr 11, 2016 na 11: 23 AM
Jason - enwere URL maka saịtị ọhụrụ ahụ?